Ha ku iloobin khadka tooska ah ee suuqgeyntaada! | Martech Zone
Ha ku iloobin khadka tooska ah ee suuqgeyntaada!
Arbacada, Juun 11, 2008 Axad, Disembar 10, 2017 Douglas Karr
Akhlaaqda macaamiisha khadka tooska ah waxay u noqoneysaa mid qiimo u leh suuqleyda internetka, laakiin ugu horreyntii waa la seegay iyadoo la tixgelinayo hay'adaha qad la'aanta. Shirkado badan oo leh dukaamada tafaariiqda, iyo sidoo kale dukaamada internetka, waxay ula dhaqmaan labada dhagaystayaal midba midka kale, iyaga oo lumiyay fursad aad u fiican oo lagu bartilmaameedsado oo loola socdo kan kale.
Advanced Analytics codsiyada sida WebTrends, Coremetrics, iyo Omniture ayaa inta badan loola dhaqmay sidii nidaamyo warbixineed laakiin waxay hayaan xog macmiil oo qiimo leh oo loo qaybin karo laguna dabaqi karo booqdayaasha gaarka ah ee xogtaada ku jira.
Email Bixiyeyaasha Adeegga sidoo kale hayso qiyaasta xogta akhlaaqda. Ku darsan Falanqaynta nidaamyadan waxay kala socon karaan dabeecadaha macaamilka guji illaa iyo beddelaad. Ku riixitaanka martidaada khadka tooska ah waxay bixisaa waddo fudud oo lagu ururiyo xogtan. Dalabyadaada, waa faa'iido inaad ku darto fure u gaar ah macaamiisha kasta.
Sida aad ugu dari karto lambarka ololaha warqad toos ah, u dhiska bogga soo degista si aad u soo ururiso furaha macaamiisha gaarka ah waa hab wax ku ool ah oo lagula socdo macaamiishaas. Boggaas degitaanku wuxuu ku siin karaa ikhtiyaar ikhtiyaar ku saleysan suuq-geyn dheeraad ah. Furaha ayaa markaa lagu dhejin karaa dhamaadka cinwaanka webka (URL) adoo adeegsanaya querystring (http://mycompany.com/'s=12345) oo lagu keydin karaa cookie halkaas oo si gaar ah loogala socon karo bartaada oo dhan.
Reeraha leh habdhaqanka khadka tooska ah ee kororka waxaa laga sooci karaa boostadaada tooska ah iyo liisaska telemarketing, taas bedelkeedna, emayl ayaa loo diri karaa - iyadoo la siinayo farriin la beegsanayo, waqtigeedana qiimo aad u jaban leh. Waxaa xusid mudan taas Xeerarka federaalka ee CAN-SPAM dalbo oo talada ugu fiican ayaa ah inaad si ikhtiyaari ah u soo ururiso cinwaannada emaylka oo aad ula shaqeyso sumcad Adeeg Bixiye Email kaas oo bixiya samatabbixin iyo adeegyo ka-saarid si looga ilaaliyo dhibaatada.
Ha iloobin in dadaaladaada suuq geyntu ay sidoo kale dib u soo celin karaan e-maylkii aad wax ku iibsan jirtay. E-mayllada wax-qabadku waa emayl kasta oo la filayo inay jawaab ka bixiyaan iibiye. Tusaalooyinka lamaanaha ah ayaa ah biilasha iyo / ama farriimaha xaqiijinta iibsashada. Haddii shirkaddaadu ay samaynayso biilasha qadka tooska ah, waxaad lumineysaa fursad qaali ah oo leh hanti maguurto ah si aad kor ugu qaado ama dalab dheeraad ah!
Haddii farriinta ugu horreyn ay tahay mid macaamil ah, CAN-SPAM uma baahna inay dalbato. Kaliya iska hubi inaadan isku darin waxyaabaha aad mudnaanta siiso maxaa yeelay waxaad ku dambeyn kartaa ganaax. Suuqgeynta Emailka waxay sidoo kale bixisaa waxyaabo firfircoon oo ku saleysan kala qeybsanaanta macaamiisha. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala beddesho farriinta ama sawirrada emayl ku saleysan macaamiishaada.
Farriin ku socota qoyska oo ka soo horjeedda arday jaamacadeed ayaa yeelan kara gebi ahaanba hadal iyo sawirro kala duwan - laakiin wali waxay ku baxaan isla isla saxda saxda ah! Xidhiidhada emailkaaga ayaa dib loogula socon karaa bogga soo degida ama goobta ay nidaamyada maareynta maadooyinka ay sidoo kale ku bixinayaan waxyaabo firfircoon. Xogtan aad ayey qiimo ugu yeelan kartaa xayeysiiyaasha sidoo kale!
Awoodda inaad ku darsato booqdayaashaada internetka xogta dadka waa fursad weyn oo aad ku siin karto xayeysiiyeyaal mustaqbalka leh tilmaamo iyo falanqeyn heer sare ah - waxayna ka qaalisan tahay kana saxnaan badan tahay adeegyada khadka tooska ah ee iska dhiga inay bixiyaan isla.
Sii xoogaa fikir ah laba ilood oo dheeri ah oo xog ah oo ku saabsan datamart-kaaga: Analytics Web iyo Email Marketing. Ka faa'iideyso xogtaas suuqgeyntaada qad la'aanta ah iyo sidoo kale inaad ku dhexjirto dadaalka Suuqgeynta Emailkaaga! Waxaad ku badbaadin doontaa tan lacag ah boostada sii kordheysa waxaadna awoodi doontaa inaad cabirto natiijooyinka degdegga ah ee khadka tooska ah.
Tags: Analyticskaraa-spamxuduntaboostada tooska ahemailadeeg bixiyaha adeegga emaylkagaar ahaanxoog -saaridsuuq dhaqameedkawebtrends
Muxuu Typepad u sameeyay WordPress Anti-Spam Plugin?
MBP: Bixiye-Blogging Micro iyo Protocol
Jun 13, 2008 saacadu markay ahayd 6:47 AM
Waa wax lagu qoslo miyaanay ahayn; sidoo kale badanaa suuqleydu waxay u adeegsadaan qaab isku mid ah suuq geyntooda. Miisaaniyadaha ayaa loo sii dejiyaa si hormaris ah waxayna ku saleysan yihiin qaadashada isla qaabkii hore. Si kastaba ha noqotee, miyaan loo baahnayn feker caqli badan? Marka miyay tahay in istiraatiijiyaddu ka soo wareegto maxaa la qaban karaa ama la qaban karaa hadda? Waxaan fursad u leenahay inaan ku ciyaarno iskudhaf weyn oo warbaahin ah ololaheena isku dhafan taariikhduna waxay na tusaysaa inay tahay hal-abuurayaasha hal-abuurka ah ee guranaya abaalmarinta ku guuleysiga hadafyadooda.
Shirkadaha, iyo warshadaha, iyagoo ku faanaya hal-abuurnimada ma ahan inay ahaato hawl adag inay noqdaan kuwo cusub.